काठमाडौंमा तरकारीको भाउ दाेब्बरदेखि तेब्बरसम्म, उपभोक्ता तरकारी नकिनिकन नै फर्किन्छन् -
काठमाडौंमा तरकारीको भाउ दाेब्बरदेखि तेब्बरसम्म, उपभोक्ता तरकारी नकिनिकन नै फर्किन्छन्
काठमाडौं। कलङ्कीको मुख्य चोकको छेउतिर सीतामाया तामाङ तरकारी बेच्दै हुनुहुन्छ । ‘एक मुठा साग (पालुङ्गो) को कति ?’, तरकारी किन्न आएका उपभोक्ता सोध्छन्।
तामाङ जवाफ दिनुहुन्छ : ‘५० रुपैयाँ।’
‘आम्मामा यति सागको ५० रुपैयाँ ?’ उपभाक्ता प्रति प्रश्न गर्छन्।
तामाङ रायोको सागको मुठातिर देखाउँदै सजिलै जवाफ दिनुहुन्छ – ‘रायोको साग त ५० रुपैयाँ छ, यो त पालुङ्गो।’
उपभोक्ता तरकारी नकिनिकन नै फर्किन्छन्।
लकडाउन हटेपछि सीतामायाले तरकारीको व्यापारलाई निरन्तरता दिनु भएको छ । झरी उघ्रिएको बिहान भएकाले व्यापार होला भन्ने आशाले उहाँ बिहान सबेरै व्यापारका लागि पुग्नु भएको थियो । केही मुठा साग, केही किलो स्कुस, तने बोडी र केही हरियो भटमास र मकै बोडी । अरु धेरै थिएनन्।
तर थोरै थोरै राखेको यो तरकारी पनि बेच्न उहाँलाई मुस्किल परेको छ । धेरै उपभोक्ता मूल्य सोधेर महँगो भन्दै फर्किने गरेका छन्।
उहाँ जस्तै डोको र सडकको छेउछाउमा बिहान/बेलुका तरकारी बेचेर जीवन चलाउनेलाई मात्र होइन अहिले उपभोक्तालाई पनि बाँच्न मुस्किल जस्तै भएको छ।
तरकारीको भाउ दोब्बरदेखि तेब्बरसम्मले बढेपछि के खाने र कसरी जीविका चलाउने भन्ने चिन्ता बढेको छ।
गएको असार १ गतेको तुलनामा अहिले काठमाण्डौको थोक बजारमा नै तरकारीको मूल्य दोब्बरले बढेको छ । केही तरकारीमा त दोब्बरभन्दा पनि बढी छ।
असार १ गते किलोको २५ देखि ३० रुपैयाँ रहेको गोलभेँडा अहिले ५५ देखि ६३ रुपैयाँ पुगेको छ।
यस्तै किलोको ३२ देखि ३४ रुपैयाँ रहेको रातो आलु अहिले ६८ देखि ७० रुपैयाँ पुगेको छ । तने बोडी किलोको २० रुपैयाँबाट एक सय रुपैयाँ पुगेको छ भने सिमी ३० देखि ३५ रुपैयाँबाट किलोको ९५ देखि एक सय रुपैयाँ पुगेको थोक व्यापारी भगवान चन्द्र उप्रेतीले बताउनुभयो।
यो भाउ खुद्रामा पुग्दा अझ महँगो हुन्छ । खुद्रा व्यापारीले ढुवानी, सटर भाडा, ज्यालालगायतलाई जोडेर थोक मूल्यमा किनेको भन्दा दोब्बर मूल्यमा तरकारी बेच्ने गरेका छन्।
उपभोक्ताले तने बोडी किलोमा दुई सय रुपैयाँसम्म तिरेको बताएका छन्।
असार महिनामा सामान्य बढेको तरकारीको मूल्य साउन लागेपछि किनि नसक्नु भएको छ । काठमाण्डौ उपत्यकामा तरकारीको मूल्य अहिले दोब्बरदेखि तेब्बरसम्मले बढेको छ।
कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भएको लकडाउनमा १०/१५ रुपैयाँ किलोमा पनि नबिकेको तरकारी अहिले किलोको एक सय रुपैयाँ र योभन्दा माथिसम्म पुगेको कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिले जनाएको छ।
खुद्रा बजारमा अहिले एक सय रुपैयाँभन्दा कममा तरकारी नै पाइँदैन । ‘थोक बजारमा नै तरकारी महँगो छ, खुद्राको त कुरै भएन’, कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिका सूचना अधिकृत विनय श्रेष्ठले भन्नुभयो।
लकडाउनका बेला धेरैले उपत्यका छोडेका, होटल, खाजा घर, रेस्टुरेन्ट बन्द रहेका लगायतका कारणले उपत्यकामा तरकारीको खासै माग थिएन । कोरोनाको जोखिमको सुरुका दिनमा धेरै घरबाहिर ननिसक्दा पनि तरकारीको माग घटेको थियो।
जब लकडाउन खुकुलो हुँदै गयो, गाउँ घरबाट उपत्यका आउनेहरु पनि बढे । होटल, रेस्टुरेन्ट पनि खुल्न थाले, कार्यालयहरु खुले । मानिसहरु घरबाट बाहिर निस्कन थाले । यसले तरकारीको माग बढायो।
तर बाढी पहिरो र लगातारको झरीले तरकारी बालीमा नोक्सानी पुग्दा मागअनुसार आयात भएन । केही ठाउँमा बाढी पहिरोले सडक भत्काउँदा तरकारीको ढुवानी रोकियो । परिणाम मूल्य तेब्बरसम्म बढ्यो।
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका सूचना अधिकृत विनय श्रेष्ठका अनुसार अहिले दैनिक ६/७ सय मेट्रिक टन तरकारीको माग छ । तर आयात ४/४ सयमात्र छ । यी तरकारी कालीमाटी थोक बजारबाट झिसमिसे उज्यालो हुँदा नहुँदै बिक्री भइ सक्छ।
कालीमाटी थाेक बजारमा राति दुई/तीन बजेरितबाटै तरकारीको कारोबार सुरु हुन्छ । बिहान ६/७ बज्दा त सबै तरकारी सकिने श्रेष्ठले बताउनुभयो।
काठमाण्डौ उपत्यकासँग जोडिएका जिल्लाबाट अहिले सजिलै तरकारीको आयात भइरहेको छ । तरकारीको अभाव भएकाले किसानले पनि राम्रै भाउ पाइरहेका छन् । तरकारीको भाउ राम्रो पाउँदा लकडाउनमा घाटा र नोक्सानी ब्यहाेर्ने किसानलाई केही राहत मिलेको छ।
धादिङका अगुवा किसान श्यामचन्द्र आचार्य भन्नुहुन्छ, ‘अहिले खेतबारीमा नै राम्रो पैसा पाइरहेका छौँ ।’ उहाँका अनुसार अहिले काँक्रो मात्रै सस्तो छ । व्यापारीले किलोको १० देखि १५ रुपैयाँ दिन्छन् । अरु तरकारी भने किलोमै ५० रुपैयाँभन्दा माथि नै छ।
सिमी ७५ देखि एक सय रुपैयाँ छ । साग पनि एक किलोको एक सय रुपैयाँ, कर्कलो मुठाको १० देखि १५ रुपैयाँ, लौका ६० देखि ७० रुपैयाँ र भिण्डी किलोको २५ देखि ३५ रुपैयाँमा खेतबारीबाट बेचिरहेको आचार्यले सुनाउनुभयो।
काठमाण्डौ उपत्यकासँग जोडिएका ठाउँका किसानले यति बेला तरकारीबाट राम्रै कमाइ गरिरहेका छन् । तर उपत्यकाभन्दा टाढाका जिल्लाबाट भने तरकारी ल्याउन मुस्किल भएको कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिले जनाएको छ।
समितिका अनुसार अहिले ८० प्रतिशत हरियो ताजा तरकारी स्वदेशी उत्पादनले नै धानेको छ । तर सबै ठाउँबाट तरकारी ल्याउन नसक्दा भाउ बढेको समितिले जनाएको छ।
समितिका सूचना अधिकृत विनय श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, ‘असार महिनाको अन्तिम हप्तादेखि देशका धेरै ठाउँमा आएको बाढी, पहिरो र डुबानका कारण तरकारीको आयात कम भयो, यसले गर्दा भाउ बढ्न गएको हो।’
यतिबेला तरकारी उत्पादनको सिजन नभएकाले मूल्य वृद्धि भएको उहाँको भनाइ छ । काठमाण्डौको बजारमा आलु र सुकेको प्याज भने भारतबाट आयात हुन्छ। उज्यालो अनलाइन
सुनको मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च, कति पुग्यो ?
वैदेशिक ऋण तिर्ने म्याद सार्ने कसरतमा नेपालः चीनले मानेन, भारत र अमेरिका चुपचाप !
मुलुक कायापलट बनाउने मुस्ताङको ३५ टन युरेनियम
२३ करोड ५४ लाख रुपैयाँका ता’स आयात
सुनको भाउ तोलाको झन्डै लाख नजिक